#OromoProtests, June 29, 2016 -
#OromoProtests, June 29, 2016
‪#‎Oromoprotests‬ Oduu Gammachisaa godina arsii lixa magalaa dodolaa guyyaa har’aa 29/06/2016 akkuma ganama waada seennee ammas kunoo dubbii gammachuutiin deebine. Obbo BAKAR SHAALEE nama dhiigaa ilmaan oromoo guutuu biyyaatti dhangalaasisee fi Lubbuu deebii hin qabne ficcisiisa turee hardha Dodola dhufee jaarsolee fi ummata hubannoo guddaa hin qabne dirqiidhaan aanaalee akka Kokosaaa, Nansaboo, Adaabbaa, Asaasaa, kofalee akkusumaa Aanoota Godinaa arsii lixa keessaa jiran hunda irraa namoonnii filamaani Dodolaatti wal gahan.Hawaasni isaan homaa hin beekan, deggartootaa keenya jedhaani walitti qabanin gaafif mormiin isaan hin tilmaaminif hin yaadin akka isaan mudatee fi Bakar Shaalee Arrabni wal hidhee waan dubbatu dhabee Oole, akka hirmaattoota irraa dubbataanitti akkuma hasaawa eegaleen dhumaati Shashamannee keessatti rawwatameen mootummaan bilisaa tahuu ibsuun eegalee oso ajandaa biraattii hin dabriin qanfachiisani ari’ani galchaniru.
Gaafilee Ummaannii Kaasee keessaa muraasa
1.Dargiin hangaa rasaasnii tokkoo fi namni tokko hafuutti taayita gad hin dhisuu jedhaa ture, isinillee (DhDUO,ADUWAI) akkas nun jedha jirtaan. amma nu gaheera jedhaani
2. Galma Wal gahiichaaa keessa Suuraa Eekaraa Malas Zeenawiitu jira, jarsii tokko BAKAR SHAALEETIN mee ol jedhii suura kana ilaali jedheen, yoo bakar oljedhee ekeraa Mallasee Ilaaluu,kan nu bulchaa jiruu ekeraa isaati malee isinii mitii dhumnu dhumnee duraa dhumaa jirraa jedhanin.
3. Yeroo bayyee JAWAR MOHAMMED Ameerikaa ta’ee ijoollee teessaan ficcisisaa jira jettaani nu burjaajeessitan, dhugaan Jawar Arsii Lixaattii iyyaa jirti, mee walaytaa fi Tigiree cuuphee fi meesha Qara qabun isatu nutti erge.namni dhugaa keennaaf iyyaa jiru Jawari sani Rabbi Umri isa ha dheeressuu jedhaanin.
4.Yunivarsitii Torbaan dhufu kana keessa Arsii lixaatti dhaga bu’uura kaayuuf mootummaan keenyaa yoo Bakar Shaale jedhu, Jarsii tokko immoo Ijoolleen ta fixxanii kambii Walaytaa fi Tigiree itti lenjiftaan yoo tahee malee, ijoollee tenya Univarsitii miti iskuulii(school) fixaa hin jirtu isin waan ajjeeftaaniif jedheen.
5. Qaamoolee Ijoollee keenya Shashamanneetti fixaa turan, maal haa goonu jedhee afaan muxataa dubbatee, Jarsoonnii keenya Umrii harragessaa isaani haa kennuu, Isinuu amma gad dhiiftaani(hiktaani) yoo akka si ammannuu barbaaddee ijaa kenya afoottii Rashansis jedhanin.
6.dhumarratti gaafii bayyee tarreessuu hin dandeenyee, waan dhumarraa isaan jedhan isin himee goolaba.Heedduu Qanfatee lafa ilaalee jennaan Namnii umriin jiddugaleessaa tokkoo BAKAR nuti siifu yaddawa jirra, Jarrii Ammaa si ariitii, yoo ari’amtee achumaan mala dhayadhuu nu wajjumaanis hin jiraattuu jedhee dubbii dhugaa dhumaa itti himan.
INJIFANNOONI KAN UMMATAA OROMOOTI. sagalee Odiyootin isinitti debi’aa dhiroo malli mali irraa
Oduun nannoo Finfinneetti qaxxamure Asii ga’e akka ibsuuti humni polisii Itoophiyaa kan meeshaa Waraanaa hidhatee jiru humna Ummata Oromoo kan meeshaa Uumama ykn dhagaa hidhate jiru wajjiin warrana gaggeeffamaa ture irratti loltun diina 17 ajjeefamaniif hedduun hojiin ala akka ta’an Odeessii gamaa sana ifa godhee jira. Garuu soba polisii amma kana miti kan du’e jechuun motummaa wakkachuu akka jirus himame. GREAT JOB Oromoo!
Four Police officers killed and seven civilians injured in a clash at Hanna Furi Area, Lafto Subcity of Addis Ababa. People have been protesting the governments decision to demolish some 30,000 houses in the area with the aim of giving the land to rich investors. The commander of the police was ambushed and his motor cycle was burned down as you see below.
Magalaa Finfinnee naannoo hannaa Furii jedhamutti walitti bu’iinsa uumameen poolisiin 4 yoo ajjeefamani jiraattonni 7 ammoo madaayuun nu gabaafamee jira.
በአዲስ አበባ ሀና ፉሪ አከባቢ በቤት አፍራሽ ግብረሀይል እና ነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት 4 ፖሊሶች ሲገደሉ 7 ነዋሪዎች መቁሰላቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። መንግስት ከ 30 ሺህ ቤቶች በላይ በማፍረስ መሬቶን ለሃብታም ኢንቨስተሮች ለመስጠት እየሞከረ ነው።
Mootummaan abbaa irree wayyaanee Finfinnee kutaalee garaa garaa keessatti manneen jireenya ummataa irraa diigun ummata boochisaa jiru. Jiraatan naannoo Nifaas Silki laaftoo tokko akka jedhanitti lafti har’a Finfinnee jala galchan tuni lafa Oromiyaa turte. Namni kuni waggaa 39 naannoo kana jiraachuu isaanii dubbachujn mootummaan ilmaan Oromoo irraa buqqisaa abbootii qabeenyaf lafa Oromoo gurguraa jira. Mootummaan kuni lammii ofiif dantaa tokko hin qabu. Nuti iddoo itti dedmnu hin qabnu. Carraan keenya nutti dukkanaa’e jedha maanguddoon kuni.
‪#‎OromoProtests‬ “Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutii ibsaan erga badee kunoo toorban lama qabanne qaama itti iyyannus dhabne rakkoon guddaan mataa nu yaabe mee kana ergaa isaa cimsaa nuuf akeekkachiisaa!”
‪#‎OromoProtests‬– (29.06.2016, ‪#‎AjjeechaaShaashamannee‬, Oromia) Naannoo Shashaamanetti gochi lubbu namoota heddu galaafate akkuma itti fufeti jira. Namoonni akka dirqamaatti motummaan bakka bu’ani biyyatti taphatan kan akka obbo Tawaldee ,jiraataa ganda 01, giroosorii Tawaldee fi Yichaalal keessa mandheefachuun lubbuu namoota heddu galafachaa jiru. Kana malees, akka isaan irratti hin beekamneef, bakka jijjiraa fi bakka dhoksaa qophessuun Oromoota ukkamsani bakka buuten isaani akka dhabamu gochaa jiru.
Maddeen Baalee fi Asallaa keessa jiranarra akka hubanneti qabsoo haqaa karaa irraa maqsuuf mootummaan yakkamtoota kumaataman lenjisee Oromiyaatti bobbasanii jiru.
Namoota yeroo heddu Oromiyaa keessaa deemani gocha kana rawwachisan qabataman kan akka Addis Dawoo fi Tiifaa Taffasee, Gasasee finfinee Tirfan nama sagalee ummataa gurguratee mallaqaa fi lafa burayuu mariyaam kessatti kename fi mati dhumaa isa waliin kallati oromiya irra deemun dararaa jira.
Addis Dawoos konkolaatan kennamefi naannoo Alem baankii fi qaraniyoo keessa jiraata. Gasasaanis Burayuu irraa kirayibetoch Astedadar naannoo kassanchis kan jiru fi mana nama diigee bakketti kufisaa jira. namoonni kun harka mirgaa ta’uun kallatti heddu keessatti qabataman wan beekkamanif ummannis akka irraa of eeguufi barumsa malchiisu akka irratti fudhatu dhaamameera.
‪#‎OduuSidaamaa‬-Ayyaanni bara Haarawaa warra saba Sidaamaa-Fiichee Cambalaalaa har’aa eegalee kabajamaa jira.
Ayyaanni magalaa Hawaasaatti kabajamaa jiru kun Ayyaana Fiichee Cambalaalaa jedhama. Ayyaanni kun guyyaa sadiif kan kabajamuu, ayyaana bara moofaa irraa gara bara haarawaatti ce’uuf kabajataniidha.
‪#‎OduuTigiraay‬-Miseensoti Koree Hojii Raawwachiiftuu Adda Bilisa Baasaa Wayyaanee shan balaa konkolaataan dhuman.
1. Adde Muluu Kaahsaay, Miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuu TPLF fi gaafatamtuu dhimma Dubartootaa
2. Aadda Nigistii Haalafoom, Waajjira Dhimam Dubartootaatti gaafatamtuu dhimma sirna saalaa
3. Ob Yoordaanos Dugimaa
4. Ob Gabra’amlaak Birhaana
5. Daani’el Girmaa-Konkolaachisaa dha.
Namooti kunneen hojiif otuu imalaa jiranii konkolataa isaanii bakka Wuqiroo Maay Tsadoo jedhamutti gargalee qilee keessatti caccabuu isaatiin dhuman.
‪#‎OromoProtests‬-Namoonni maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffaman kunneen Oromiyaa giddu galaa, godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaa irraa kanneen hidhamanii dha. Namooti kunnean ergamaa wayyanee bulchaa ganda Harroojjii Ejersa Nadhii kan ta’e, Addunyaa Magarsaa, erga hiisisee baatileen ja’aa ol lakkoofsisee jira.
Namooti kunneen haga yoonaatti Mirga wabiis murtiis dhabanii mana hidhaa Ejersaa kan Walisoo jiru keessatti dararamaa jiru. Jarreen kun ganduma Harroojji Ejersaa Nadhii Keessaa walitti qabamanii hidhaman.
Maqaa, umurii fi hojiin isaanii kana:
1.shallamaa dirbabaa birru-umri-67-q/bulaa
2.urgeessaa ibsataa shorroo-um-57-q/bulaa
3.indaalaa tafarraa banabbaruu-um-70-q/bulaa
4.isheetuu tasammaa shallamaa -um.25-q/bulaa
5.tasfaayee warqinaa gurraachoo-um-48-q/bulaa
6.geetaachoo rafeeraa ukaa-um-28-q/bulaa
7.bareechaa galataa gargaaraa-um-19-q/bulaa
8.dajanee raffisaa baqqalaa-um-27-q/bulaa
9.warqituu asnaaqaa dassaaleny-dubarti-um-30-q/bulaa
10.tsaggaayee mitikkuu tsaggaa-um-55-q/bulaa
11.baqqalaa lateeraa gaaddisaa-um-35-q/bulaa
12.bulloo shallamaa qurus-um-45-q/bulaa
13.balaachoo naggasuu caalchisaa-um-22-q/bulaa
14.alamaayyoo dabbabaa jootee-um-40-q/bulaa
15.shantamaa abarraa gannatii -um-50-q/bulaa
Namoonni ragaa sobaa irratti bahaaa jiran:
1.addunyaa magarsaa-bulchaa gandichaa
5.dirribsaa tarreessaa-bulchinsafi nageenya gandichaa
6.biraanee shimallis-haadha manaa addunyaa bulchaa gandichaa
Jiraattoonni kutaa Nifas Silkii Laaftoo manni isaanii akka jalaa hindiigamne mormataa oolan.OMN:Oduu Wax.28,2016 Jiraattoonni naannoo Qarsaa fi kontomaa kutaa bulchiinsaa Nifaas silk-laaftoo, galma waltajjii Laaftootti walgahuun manni keeenya diigamu hin qabu jechuudhaan hoggantootaa gaaffiin jonjessuu bira darbee sagalee isaanii dhaggeessisaa oolun isaanii himame.Gaaffii jiraattota kanneen deebisuuf gahumsa kan dhabe qaamni waltajjii kana walitti qabe mana keessaan gadi lakkisuu qabdu kan jedhu malee mala furmaata kennuu dadhabuun isaanii immoo dubbichaas haalan hammeessa jiraas jechuun jiraattonni dubbatan jiru.Magaalaa Finfinne Kutaa bulchiinsa laaftoo labutti, guyyaa har’aa jiraattonni gaaffiiwwan gurguddoo dhimma mootummaan Biyyitti bulcha jiru manneen jireenya isaanii irratti diiguu fi dabarse investerootaaf kennuuf jedhu irratti qondaltoota waliin mari’atani falu dhabu isaanii irraa kan kahe dubbii guddaan uumuun gara mormiitti jijjiramuun isaa dhaggahame.Namni waggoota afurtamii afuuriif iddoo kana jiraatanis, dhimmichi mootummaan tahe jedhe waan jal’inaan guuteen, daba lammiilee irratti raawwacha jirudha malee, bu’uurri isaa faayadamummaa lammiilee kan gidduu galeessaa godhaate miti jechuun dubbatu.Jiraataan waggaa dheeraaf naannoo kana jiraatan akka jedhanitti, naannoo amma mootummaan karoora irratti baase jiraattoota buqqisuuf tattafattu kuni naannoo Oromiyaa keessatti kan argamudha. Garuu jedhu namni kuni, deemsa keessaa gara magaalaa Finfinneetti dabalame, karoorri amma mootummaan itti jiru kuni immoo,namoota harka-qalleeyyii kuma sodoma(30,000)olitti lakka’amaan miidhuu danda’a, kuni immoo itti aantumma sabaa bulchaan dhabu agarsiisaas jechuun sagantaa manneen jireenya diiguu kana hadheeefatani mormanii jiru.Namoota iddoo kanatti mana ijaaratani jiraatanis, waraqaa ittiin lafa bitani mana ijarratani fida qonnan bultoota irraa qarshii keessaan isiniif deebisisne jechuun jiraattota giddutti wal-dhabde uumuuf carraqqiirra jiraachuun qaamota mootummaa immoo uummatichi dubbii isaanii harkatti tufataniruus jedhame jira.Waan garaa nama nyaatu jedhu namni nuyi dubbisne kuni, dhiibbaa gama mootummaan isaanii qunnama jiru jala bahuuf, waktiin isa gannaa waan taheef ji’oota muraasa nuuf kenna biyya keesssa iddoo dhabne jira ,biyyoota oollatti illee baqanna isaa jedhuuf illee deebii mootummaa irraa dhabu isaanillee namni kuni dubbataniru.Iddoo garaagaratti fala argachuuf socho’uu fi gaaffii hanga masaraa mootummaa biyyitti dhiyeeffachuun keenya illee, rakkoo godhate akka balleessatti ittiin abarama fi dorsifamajiru jechuun dhimmichaa hadheefatani komatu.Miidiyaaleen dhuunfaas tahe biyyoota alaa biyyitti keessaa socho’uun dhorkame kan jirudha, garuu warreen miidiyaa mootummaa EBC, FBC iddoo kanatti argamanis dhugaa jirtugara mootummaatti dabsani waan gabaasanii namni yaada kennuuf dhibuun immoo dubbicha hangam mootummaa fi sabicha gidduutti hameenyummaan akka jabaate kan agarsiisudha kan jedhaniis nama nuyi dubbisnedha.Namni kuni akka jedhanitti, bulchittoonni kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Nifas silk laaftoo obbo Fitsum fi obbo Taarikuu namoonni jedhaman, waayita fillanno sagalee ummataa argachuuf waaadaa baay’ee jiraattotaaf kan galaniis, amma waadaa sana haaluudhaan gara jabeenyumma guddaan namoota kanneen irratti murteessa jiraachun isaanii immoo dubbicha haalan hammeessa jira.Digaamuun manneen kana, namoota 30,000 oli tahani mana malee hambisuuf jira waan taheef, yoo mootummaan dhimmaa keenya nuuf ilaalu hin barbanne maal tahu fi mudaachu mala kan jedhu gaaffii keessaa nama galcha jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa nifaas silki laaftoo naannoo Qarsaa fi kontoma waamicha isaanii dabarsataniru.Dhimma kana waliin wal qabate, lubbuu fi dhiigni hedduun dhangala’u ni mala shakkii jedhu akka qabanis dursani beeksisaniru.Jiraattonni yeroo hunda gadi bahanii dabareedhaan qaama mana isaanii diiguu eega jiru, mootummaan biyyittis tahe warreen meeshaa hidhatan immoo ergama isaanii rawwachu irraa duubaatti hin deebi’anii, sabicha dhaggahu dhiisuu aadaa erga godhaatanis bubbulan jiru.Itti aantumma sabaa bulchani karaalee miidiyaa biyyitti dhaggeenyu malee qabatamaatti hin argines jechuun dubbatu.Yerooma dhiyoo kana, dhimma manneen diiguu kana waliinwal-qabate magaalaa Finfinnee kutaa bulchinsa Boolee bulbula naannoo warra Ganuu keessatti namoonni sadii ajjeefamu isaaniis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama.Itichaa Guddataatiin.
Guyyaan kun hinuma darba. Warri sana keesaan diinaf dabarsitanii kenitan kun boolla kamitti akka duudan teenyee ilaalla. Dacheen kuun nuu isin qalqixa baachuu hin dandeessu kana beekaa. Guyyaan sunis fagoo miti.
Booreedhaa booranaa bookisee wal wamee Oromoo barana! !!
Qabsoo bilisummaa afaan Oromoo: Waligayii marii afaan fi aadaa Oromoo irratti barruu dhiyaate
Dispatches: Ethiopia Ascends to UN Security Council Despite Dismal Rights Record
3 thoughts on “#OromoProtests, June 29, 2016”
Dhugaa dubachuuf galgalli keenya kan tolu hinfakaatu. Wal jalaa calisaani taa’un, kan dinni hojjatu walitti gabaasun qofaan kan kessaa baanu miti. Ummata gamtaan sochoosu barbaada. Fagoo osoo hindhaqin asumatti “Washington DC” hawaasa Oromoo jiru gamtaan sochoosu rakkisaa jira. Waanan arge tokko hawaasa oromoo kessaa namumti tokko gara mana oromoo kan hindhufune jira. Tokko hawaasa Arsii Baaleedha. Hin argine amma yoona. Yoo dhabun dhaamsa ergaa dabarse. Akkam goone “community” sochoosna jedheen itti dhaame. Waanti nuti hojjanu gara biraatii “replicate” ta’a. Isaan ya dhaqabu yaa dhisuu hinbeeku. Dhaamsa garu dabarseera. Isaan qofaas miti hawaasa Jimma kessa kan maqadhaadumaan beekus maqaa kaase, enyu jettan Qaasim Abbaa Nashaati, akkam godhe walin hojjadhaa jedheen kaase. Milkaa’u hin dandeenye amma yoona. Dubbi gabaaba, “community” keenya kan “Washington DC” sochoosu barbaadnu walitti deemu qabna.
Yoo “community” keenya sochoosne, “resource” nu barbaachisu galma walga’i ummataa qophessu feenu nutti salphata. Dhugaadha ammaantana marii ummata barbaachisaadha. Qerroo karuma nagaan socho’aa jiran bakka hundatti akkatti gargaarulle walumaan hojjanna. Sochiin isaani dhaamu hinqabu. Ijooleen karaa nagaa socho’an kaan hidhamaa jiru. Kaan barumsa irraa buqqa’aa jiru. Kan arsaa kafalanis jiru. Sochiidhuma jirulle ijoolleen kuni gara keenyatti gabaasuf, waan ittin socho’an isaan barbaachisa.
Akkam goona jenne ummata mariif waamu feenu galma nu barbaachisa. Waantota akkasi qophesuf “community” jabaate nu barbaachisas. “Resource” barbaachisan “community” harka jira. Kanaafan dhaamsa/ergaa hawaasa hundatti dabarse. Namoota qabsoo karaa nagaan biyya kessatti hojjachaa jiranis sadarkaa qabsoo ummata, raakoon jiran, sochii jiran kkf ummata walin mariin barbaachisu xiqqaatu galma barbaada. Gabaabumatti, qabsoo biyya kesatti ademaa jiru karuma fedheenu yaa ta’u sochoosuf, “community” jabaa barbaada. Hawaasota dhqabu yaale hundi kessan waan jedhu kanaaf deebi kenna. Itti yaada. Xinxalaas.
Gtmi. Yaadnikee sirriidha rakon Melbourne keessa jirus kanuma Oromo kootaa walhajabeeffannu. Kophaa fiiguun humaa hinfidu. Diina ofitti qancarsuu dhiisuudha.kana dhagahuu baanaan diinaf hojanna jechadha.
Qabsoon Oromo tan ummata keenyarratti irkatte waan taheef ABOn WBOn akka hin jabaanne kan godhe waan armaan olitti Jimma fi Biyyako kaasani, qabsoon nagayaa yaroo hamma tokkoof deema malee itti hin fufu Oromo humna tahuu nu barbaachisa kana godhuuf tokkummaan Oromo murteessaadha. Injifannoo Ummata Oromoof